Mezzanines inokutendera iwe kushandisa iyo yakakwira kukwirira kweimba yekuchengetera uye yakapetwa kana katatu nzvimbo yepamusoro.
Kuwedzera Mezzanine inogona kunge iri nzira yakachengetedza mari yekuwedzera nzvimbo yekuchengetera pasina mutengo wekuwedzera kwekuvaka.
◆ Wedzera kukwirira kwekuchengetedza uye nzvimbo yekushandisa;
Yakakamurwa nepakati pe3-2 pasi semazuva ese iyo inogona kutakura 300-500kg / ㎡
◆ Iwo ma cargos paburiro rekutanga mezzanine anorema uye danda rega rega rinogona kutakura 500kg zvakaenzana, zvinosanganiswa nemaoko engoro kana echinyorwa hydraulic trolley. Iwo ma cargos pauriri hwechipiri nerechitatu anowanzoita makirogiramu mazana matatu padanda rega uye akasanganiswa nengoro yeruoko;
Machine wekufambisa muchina: Simudza chikuva, hoister, conveyor kana forklift;
◆ Yakaderera mutengo uye inowana akasiyana siyana e cargos zviri nyore.
◆ Mapurani zvikamu zvine mafuremu akamira, matanda, pasi, laminates, masitepisi uye waya meshes.
◆ Chikamu chekubatanidza: Yese-yakasungwa;
◆ Floor mapato: Uchishandisa inotonhorera yakapetwa chimiro pasi, senge glaze pasi, yakazara riffled, pasi grated uye perforated pasi; Yakabatanidzwa pamatanda nekubatanidza chimiro uye yakazara Nice.
HEGERLS mezzanine racking 2021 yepamusoro 300kgs pa sqm ine simba rekunamatira zvidiki zvidimbu zvekuchengetedza
Isu tinopa HEGERLS mezzanine racking 2021 yepamusoro 300kgs pa sqm ine simba rekunamatira zvidiki zvidimbu zvekuchengetedza .. Isu tinozvipira isu kune yekuchengetera munda kwemakore makumi maviri neshanu ruzivo. Tiri kutarisira kuva wako kwenguva refu naye mu China.
Chigadzirwa kuiswa kwe mezzanine rack
Mezzanines inokutendera iwe kushandisa kukwirira kwakakwirira kweimba yekuchengetera uye kaviri kana katatu pamusoro penzvimbo.Kuwedzera Mezzanine inogona kunge iri nzira yehupfumi yekuwedzera nzvimbo yekuchengetera pasina mutengo weyakajairika chivakwa chekuwedzera.
Akarurama Loading Mashoko Ruvara Kudzika
55 * 56/80 * 70 300kgs pa sqm SS400 RAL5005 / RAL2004 600-1200mm
Chigadzirwa ficha uye kushandiswa
Dhizaini yekugadzira mezzanine rack
Mapurani zvikamu zvine mafuremu akamira, matanda, pasi, laminates, masitepisi uye waya meshes.
Pashure: Warehouse Kuchengetera Heavy Duty Simbi Pallet Racking Sisitimu
Zvadaro: HEGERLS kutyaira mune anonetsa system
Simbi Mezzanine Pasi